တစ်ပတ်ကို ဘယ်နှစ်ကြိမ်လောက် မျက်နှာပေါင်းတင်သင့်လဲ…. - Myanmarload
တစ်ပတ်ကို ဘယ်နှစ်ကြိမ်လောက် မျက်နှာပေါင်းတင်သင့်လဲ….
22-May-2022 5pm ·amonth ago
အသားအရေထိန်းသိမ်းမှုက လူတိုင်းလိုလိုလုပ်သင့်တဲ့အရာတစ်ခုပါ။ လူတိုင်းမှာရှိတဲ့ အသားအရေအမျိုးအစားက တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မတူတာမို့ ဘယ်လိုအသားအရည်က တစ်ပတ်ကို ဘယ်နှစ်ကြိမ်လောက် လုပ်ပေးသင့်လဲဆိုတာ မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
သင်က ခြောက်သွေ့တဲ့အသားအရေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ ရေဓာတ်ဖြည့်ပေးဖို့လိုအပ်တာမို့ ရေဓာတ်ကြွယ်ဝတဲ့ မျက်နှာပေါင်းတင်ခရင်မ်၊ ဗီတာမင် E ပါတဲ့ Mask တွေနဲ့ တစ်ပတ်ကို နှစ်ကြိမ်ကနေ
အဆီပြန်တဲ့အသားအရေပိုင်ရှင်တွေကတော့ ရွှံ့စေးတို့၊ အဆီဓာတ်လျော့ပြီး ရေဓာတ်ကြွယ်ဝတဲ့ မျက်နှာပေါင်တင်ခရင်မ်တို့၊ အဆီဖယ်ရှားပေးတဲ့ မျက်နှာပေါင်းတင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ တစ်ပတ်ကိုတော့ ၂ ကြိမ်လောက်ပေါင်းတင်ရင် လုံလောက်ပါတယ်။
၃။ Sensitive အသားအရေ
ကိုယ့်အသားအရေက Sensitive ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ်နဲ့သင့်တော်တဲ့ ပေါင်းတင်ခရင်မ်၊ Mask တွေကို ရှာသင့်ပါတယ်။ ရှားစောင်းလပတ်နဲ့တည့်ရင်သုံးနိုင်တယ်။ Collagen ပါတဲ့ Mask တွေနဲ့ အခြားအသားအရေချောမွေ့စေတဲ့ Mask တွေအသုံးပြုပေးလို့ရပြီး တစ်ပတ်ကို
လူငယ်တွေမှာပါ အဖြစ်များလာတဲ့ Insomnia
Justin Bieber ဘာလို့ လေဖြတ်သွားရတာလဲ၊ ဘယ်လိုကုသနေလဲ
ဓမ္မတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မှားယွင်းတဲ့ အယူအဆများ